मोदीको जीवन अब फिल्ममा, के बन्दै छ मोदी ? | NepalDut
मोदीको जीवन अब फिल्ममा, के बन्दै छ मोदी ?
बलिउडमा पछिल्लो केहि वर्षयता बिभिन्न चर्चित ब्यक्तिहरुको जिवनीमा आधारीत फिल्महरु निर्माण भईरहका छन् भने अगामी दिनमा पनि हुने तयारिमा छन् । केहि समय अगाडि मात्रै भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री डां मनमोहन सिंहको जिवनीमा आधारीत फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राईममिनिस्टर’का ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवनमा आधारीत एक फिल्म बन्न गईरहेको छ । जसको पोस्टर ७ जनवरीमा प्रदर्शन गरिने छ ।
फिल्म द एक्सीडेंटल प्राईममिनिस्टरको ट्रेलर जब सार्वजनिक भयो त्यही समयबाट फिल्मको खुबै चर्चा आएको छ । सो फिल्मको चर्चा आए लगत्तै भारतीय बर्तमान प्रधानमन्त्री मोदीको पनि आधिकारिक घोषणा भएको छ । यस फिल्मलाई लिएर ७ जनवरीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिदै छ । जसको महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसले फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक गर्ने छन् ।
सो कार्यक्रममा फिल्मका मुख्य भुमिका निभाउने नायक बिबेक ओबराय र प्रोड्युसर सन्दीम सिंह पनि सहभागी भएका थिए । जानकारका अनुसार उक्त फिल्मको नाम ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ हुने छ । फिल्मको शुटिंग जनवरीको दोस्रो हप्ताबाट शुरु हुने छ । यस फिल्मको निर्देशन मंगेश हदावालले गरेका थिए भने यसको प्रस्तुत आनन्द एल रायले गर्देछन् ।